မြရွက်ဝေ: "aircon/ heater ဖွင့်ရင် မီတာသက်သာစေသောနည်း"
Posted by မြရွက်ဝေ at 11:06 AM
ဗဟုသုတ ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါနော်။ ပိုက်ပိုက်ကုန်လည်း ဖွင့်နေရတော့တာပဲ ညီမရေ။ ဘယ်လိုပူလောင်လှတဲ့ ဂျပန်ပြည်လဲ မသိဘူး။ ဒီနည်းလေးတော့ မှတ်ထားအုံးမှ။ ပန်ကာတော့ မရှိဘူး။ ကျောင်းမှာပဲ အိပ်ရမလား စဉ်းစားနေတာ။ lab ကို မနက်အစောကတည်းက သွားနေတာကောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ယာက မထနိုင်ဘူးတော့။ :P
inn. here also.
super hot..seldom get cold!
anyway thanks for the tips sis!
so many cutie inventions in japan naw..
lae lae lar chin de :P
invite mha lah mama wei?
Mya Ywat ,
Thsanks for sharing such kind of knowledge.
save the world by saving power
if u save more power , the weather will become more stable :)
ဒီတော့ ရေထဲကို သာ ၀င်စိမ်နေပေတော့ဗျို့ အဟိ
ညီမလေးရေ.. နည်းသစ်လေးတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ အခုမှ သိတာ။ ဆောင်းတွင်းလည်း အဲဒီလို မှန်မှာ ကပ်ရမှန်း မသိတော့ ရေငွေ့ပြန်ပြီး ပြူတင်းပေါက်အောက်ခြေတို့ အိမ်အ၀င်တံခါးခြေနင်းတွေမှာ ရေကို အိုင်နေတာပဲ.. နေ့တိုင်းလိုက်သုတ်ပေးရတယ်။ အခုနည်းကို လာမယ့်ဆောင်းတွင်းမှာ စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်.. :)
မမပြောမှဘဲ အဲ့လိုလုပ်လို့ရမှန်းသိတော့တယ်။ကျမကတော့ နေ့ဆိုရင် ပြတင်းပေါက်တွေ(၂ပေါက်)​ဖွင့်ထားပြီး သဘာဝလေလေးနဲ့နေတာပဲ။Air conနဲ့ မတည့်လို့လေ။ညဆိုရင်တော့ ဒုက္ခ
ရောက်တာပေါ့နော်။ပြတင်းပေါက်လည်း မဖွင့်ရဲ၊Air conကလည်း မတည့်နဲ့ဆိုတော့။ဒီနွေရာသီ မြန်မြန်ကုန်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိတော့တယ်သိလား။
ကျေးဇူး .. မမဝေ..